Luuqad - Howling Pixel
Kani waa maqaal ku saabsan luuqadaha dadka guud ahaan. Qoraalo kale fiiri Luuqado Badan.
Haku khaldin boga lahjad.
Maabka luuqadaha shacabka caalamka.
Af (Af-Carabi: لغة; Af-Taliyaani: linguaggio; Af-Ingiriis: language, lãnŵeyj) waa awooda iyo nidaamka suurto geliya in dadku isfahmaan ayagoo ku wada hadlaya shanqadha codka. Luuqadu waa nidaam u gaar ah bulsho isku deegaan ah, asal ah, qabiil ama qolo, iyo isku wadan ah. Luuqadu waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjisada ah ee u gaarka ah bani aadamka, tasi oo suurta gelisa ineey labo qof ku xidhiidhaan isla markaana isku fahmaan shanqadha iyo jabaqda codka ee ka soo baxaya afkooda.
Aqoonyahanada caalamku waxay aad ugu murmaan sidii luuqadaha aduunku ku bilaabmeem. Qaar ka mid ah waxay aaminsan yihiin in luuqaduhu ka soo unkameen dareenka dadka, halka kuwo kale shegaan in luuqadu ka soo bilaabantey waayo-aragnimo loo yeeshay shay ama marxalad.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa maanta ma diiwaan gashana dhamaan luuqadaha caalamka lagaga hadlo, laakiin waxaa lagu qiyaasaa tiro u dhaxaysa 5,000 ilaa 7,000 luuqadood taasi oon lagu darin lahjada kala duwan ee luuqad leedahay. Guud ahaan, casriga maanta iyo xadaarada caalamka ayaa waxay wakhti xaadirkan suurto-gelisay in dadku awoodaan ineey duubaan codka luuqadaha, qoraan, sawiraan ama nashqado kale u sameeyaan. Intaas waxaa dheer, waxaa jira dadaalo badan oo la rabo in lagu sameeyo turjumaad caalami ah oo u dhaxaysa luuqadaha kala duwan ee caalamka.
Luuqada caalamiga ah ee bulshooinka caalamku guud ahaan aqoonta u wada leeyihiin waa Ingiriiska, taasi oo lagu sheego ilaa 26% bulshada caalamku ineey fahmi karaan ama ku hadli karaan.